07-Jun-22 ဆရာကြီး ဦးကြည်စိုးIC
သက်တမ်းမရှိတဲ့ SP/GPအိမ်ခြံမြေ တစ်ခုအား Special Power ဖြင့် ဝယ်ယူခဲ့ပြီး ကာလ ၃ နှစ်ကျော် ကြာခဲ့၍ (Sp) Expired ဖြစ်သွားသော အခါ မည်ကဲ့သို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည်နည်း*******************************************ယခု စာဖတ်သူသိချင်နေတဲ့မေးခွန်း က ၃နှစ်ကျော်သွားပ...
ပါမစ် #အတု ရဲ့ အဂ်ါရပ်လေးတွေ ဗဟုသုတ အဖြစ် ရေးသားပေးပါမယ်။
ပါမစ် #အတု ရဲ့ အဂ်ါရပ်လေးတွေဗဟုသုတ အဖြစ် ရေးသားပေးပါမယ်။အခုလက်ရှိ ပါမစ်တွေကတော့ ဝယ်လိုက် အမြတ်နည်းနည်းရရင် ပြန်ရောင်းလိုက်နဲ့ သူ့ဘာသူတော့လည်ပတ်နေတာပါဘဲ။အခြားမြေအမျိုးအစားတွေထက်လဲ အရောင်းသွက်တဲ့ မြေအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့တော့ အရောင်းသွက်တဲ့ မြေ...
ဂရန်ရှိသည် ပိုင်ရှင်မရှိအခုလိုမေလရောက်တိုင်း မှတ်မိနေပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့တစ်လကျော်မေလက ကျွန်တော်ထံ သင်တန်းသားတစ်ယောက် ရောက်လာပါတယ်။ နာမည်က “ဂွမ်ဂျာလ” တဲ့၊ တိုင်ရင်းသားပါ။ သူကမြန်မာစကားတောင် ပီပီသသမပြောနိုင်သေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ အလုပ်လုပ်တာမှာတော့ တော်တော်လေး...
အကွက်ရိုက်ရောင်းတဲ့ မြေကွက်လေးတွေ တန်တယ် ဆိုပြီး ဝယ်ထားလိုက်တာ...ဘာဖြစ်နိုင်လဲ ?
Q <<<>>>အကွက်ရိုက်ရောင်းတဲ့ မြေကွက်လေးတွေတန်တယ် ဆိုပြီး ဝယ်ထားလိုက်တာ...ဘာဖြစ်နိုင်လဲ ?မေးသူများAns <<<>>> မဖြစ်မချင်းတော့ ဘာမှ မဖြစ်ဘူး...ဖြစ်လာရင်လည်း ဘာမှ ပြန်မရဘူး...တရားမဝင် မြေကွက်ရိုက်ရောင်းတဲ့ လုပ်ငန်းဟာဥပဒ...
မြေဂရန်ရှိတယ်ဆိုပြီး နေချင်သလို နေလို့တော့ မရပါဘူး၊
မြေဂရန်ရှိတယ်ဆိုပြီး နေချင်သလို နေလို့တော့ မရပါဘူး၊ စည်းကမ်းတွေ ရှိတယ်၊ သက်တမ်းလည်း ရှိပါတယ်၊ မဖြစ်ရင် ဘာမှမဖြစ်ဘူး၊ ဖြစ်ရင်လဲ ဥပဒေအရပါပဲ၊ အများပြောတဲ့ ဂရန်ဆိုသော မြေငှားစာချုပ်ဟာ နိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် ဂရန်ရသူတို့အကြား ချုပ်ဆိုတဲ့ ပဋိညာဉ်စာချုပ် တစ်...
မြေပုံရာဇဝင်အကြောင်း လေ့လာသိရှိထားရန်မြေပုံမြေရာဇဝင်ဆိုသည်မှာမရွှေ. ဖြစ်တဲ့မြေကို အရောင်းအဝယ်လုပ်ပြီဆိုတာနဲ. မြေပုံမြေရာဇဝင်ဆိုတာ ပါလာပါပြီ။မြေတစ်ကွက်ကိုဝယ်မယ်ဆိုရင် “မြေပုံမြေရာဇဝင်” ကို အရင်စစ်ဆေးရမယ်လို. ဥပဒေတွေမှာ ပါပါတယ်။“မြေပုံစာရွက်ရယ်” ၊ “မြေ...
“အိမ်ခြံမြေဝယ်မယ်ဆိုရင်”မြေတစ်ကွက်ဝယ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ၊ဘာတွေလိုအပ်သလဲ စသည်ဖြင့် မေးမြန်းသူတို့ သိသာရန်အတွက် တန်ဆောင်တိုင်လပြည့်နေ့တွင် အောက်ဖော်ပြပါ စာစုကလေးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။(၁) ဝယ်ယူမည့် မြေကွက်၏ ဂရံ၊ ပါမစ်၊ စလစ် စတာတွေကို အရင်စစ်ရပါမည်။၄င်...
အမွေဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ကြောင်း မြေပုံမြေရာဇဝင်ကူးယူခြင်း (ဂရန်မြေ)
အမွေဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ကြောင်း မြေပုံမြေရာဇဝင်ကူးယူခြင်း (ဂရန်မြေ)- မြေအမည်ပေါက်ပိုင်ရှင်များဖြစ်သောမိခင်ဖခင်ကွယ်လွန်ခြင်း၊ ဇနီး ခင်ပွန်း ကွယ်လွန်ခြင်း၊ညီအကိုမောင်နှမ များကွယ်လွန်ခြင်း တို့ကြောင့် ကျန်ရစ်သူများမှာ အဆိုပါမြေကွက်အားရောင်းချလိုခြင်း[သို့မဟု...
လယ်ယာမြေပုံစံ(၇) ရရှိထားသူက မြေဂရန် လျှောက်ထားရန် နည်းလမ်း
လယ်ယာမြေပုံစံ(၇) ရရှိထားသူက မြေဂရန် လျှောက်ထားရန် နည်းလမ်းလယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုလက်မှတ် ပုံစံ(၇) ရရှိထားသော မြေကွက်ကို အမည်ပေါက် ခြံဂရန် လုပ်ကိုင်လိုသည့် အတွက် အရင်ဆုံးဆောင်ရွက်ရန်မှာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လယ်ယာမြေဥပဒေပုဒ်မ ၃၀(ခ) အရ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး...
မြေစာရင်းပုံစံ (၁၀၅) တွင် “ပိုင်ဆိုင်ခွင့်” ရေးသားမှုပုံစံနှင့် မြေမျိုးနှင့်အတန်း နေရာတွင် ရေးသားခြင်းများအား အများပြည်သူ သိရှိနိုင်ရန်၊ သတိပြုနိုင်ရန် မြေစာရင်းပုံစံ (၁၀၅) ရေးကူးခြင်းဆိုင်ရာ နည်းလမ်းညွှန်ကြားချက် များအား တင်ပြလိုက်ပါတယ်။ (၁၀၅) တွင်ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရေးသားရာ၌...
မြေစာရင်းပုံစံ (၁၀၅) တွင် “ပိုင်ဆိုင်ခွင့်” ရေးသားမှုပုံစံနှင့် မြေမျိုးနှင့်အတန်း နေရာတွင် ရေးသားခြင်းများအား အများပြည်သူ သိရှိနိုင်ရန်၊ သတိပြုနိုင်ရန် မြေစာရင်းပုံစံ (၁၀၅) ရေးကူးခြင်းဆိုင်ရာ နည်းလမ်းညွှန်ကြားချက် များအား တင်ပြလိုက်ပါတယ်။(၁၀၅) တွင်ပ...